Ciyaaraha - BBC Somali
Sane oo £37m ugu wareegaya Manchester City
Leroy Sane oo u dheela kooxda Schalke ayaa waxa uu u dhaw yahay inuu kooxda Manchester City ugu soo wareego adduun lacageed oo gaaraya £37m.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Sane oo £37m ugu wareegaya Manchester City
Ibrahimovic: mustaqbalka United wuu ifayaaa
Zlatan Ibrahimovic ayaa aaminsan in “wakhti aad wanaagsan uu ka horeeyo” arrintaas ayuu sheegay kaddib markii uu gool qurusan ka dhaliyay ciyaartii u horaysay ee uu u safto Red Devils.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Ibrahimovic: mustaqbalka United wuu ifayaaa
Guddiga caalamiga ah ee ciyaaraha Olympic-ga ayaa waxa uu ku dhawaaqay in seddax xubin oo kamid ah guddiga ay soo saari doonaan diiwaanka ciyaaryahanada Ruushka uga qeybgalaya tartamada Rio.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan IOC oo soosaareysa diiwaanka dadka Ruushka u aadaya Rio
Brayan Jiminez oo dambi qirtay
Brayan Jiminez oo ah madixii hore hay’adda maamusha kubadda cagta ee Guatemala ayaa dambi ku qirtay maxkamad ku taalla magaalada New York.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Brayan Jiminez oo dambi qirtay
Samir Nasri oo cayil dartii tababarka looga reebay
Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaaraha kooxda Manchester City, Samir Nasri ma uusan ciyaarin inta lagu guda jiray ciyaaraha saaxiibtinimada iyo tababarada taas oo ay ugu wacan tahay inuu cayilay, sidaasi waxaa sheegay macallim Pep Guardiola.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Samir Nasri oo cayil dartii tababarka looga reebay
Man City oo wadahadallo la furtay John Stones
Manchester City ayaa waxa ay wadahadallo la furtay kooxda Everton si ay uga wada hadlaan suuragalnimada in daafaca kooxdaasi John Stones uu u soo wareego kooxdaasi.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Man City oo wadahadallo la furtay John Stones
Guardiola oo xadidaya miisaanka ciyaartooyda
Maamulaha cusub ee kooxda Ingiriiska ee Manchester City ayaa sheegay inuu xooga saarayo caafimaadka jirka ee kooxdiisa.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Guardiola oo xadidaya miisaanka ciyaartooyda
Puntland oo qaaday koobka m. goboleedyada Kooxda Puntland ayaa ku guuleysatay koobka maamul goboleedyada Soomaaliya ee ka socday caasimadda Muqdisho, ka dib markii ay gool ku laad uga adkaatay kooxda Jubbaland.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Puntland oo qaaday koobka m. goboleedyada Ciyaartii labada Manchester oo baaqatay
Waxaa baaqatay ciyaar saaxiibtinimo oo Shiinaha ku dhex mari lahayd Manchester United iyo Manchester City, kaddib markii roob mahiigaan ah uu da'ay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Ciyaartii labada Manchester oo baaqatay
IOC: Ciyaaryahanada Ruushka oo dhan lama mamnuucayo
Guddiga Olombikada ee caalamiga ah ayaa go’aansaday in uusan ciqaab wadareed dul dhigin dhamaan ciyaaryahanada Ruushka uga qaybgalaya tartamada Rio,
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan IOC: Ciyaaryahanada Ruushka oo dhan lama mamnuucayo